साढे २४ करोड बढीको आईपीओ निष्काशन गर्दै चार लघुवित्त कम्पनी, कुनको कति ? - Arthatantra.com
साढे २४ करोड बढीको आईपीओ निष्काशन गर्दै चार लघुवित्त कम्पनी, कुनको कति ?
काठमाडौं । विभिन्न चार माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले २४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने भएका छन् ।
ती चार लघुवित्त वित्तीय कम्पनीको २४ लाख ६७ हजार कित्ता आईपीओ आउने भएको हो । कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवदेन दिएका छन् ।
आईपीओ निष्काशनका लागि नेष्डो सामूदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, जाल्पा सामूदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् ।
नेष्डो सामूदायिक लघुवित्तले ८ करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ लाख २८ हजार ७५० कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । उक्त आईपीओ निष्नकाशनका लागि कम्पनीले असरा ६ गते बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ ।
यस्तै, जाल्पा सामूदायिक लघुवित्तले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न असार २० गते बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बोर्डले अनुमति दिएमा कम्पनीले ५ लाख २२ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्नेछ । बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
यता, साढे ८ करोडको आईपीओ निष्काशनका लागि असार २४ गते राष्ट्र उत्थान लघुवित्तले बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बोर्डको अनुमति पाएसंगै कम्पनीले ८ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्नेछ । बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
त्यसैगरि उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले २ लाख ६६ हजार २५० कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि गत साउन १३ गते बोर्डमा निवेदन दिएको हो ।
कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ६ आइतवार १७:०७ मा प्रकाशित
अघिल्लाे कुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति र निर्माण खर्च कति ? (विवरणसहित)
पछिल्लाे मानुषी लघुवित्तको आइपीओ आज बाँडफाँट, २३ लाख ६६ हजार को हात खाली, कतिले पाउँलान १० कित्ता ?